ividiyo - Xingtai Huimao Trading Co., Ltd.
I-Xingtai Huimao Trading Co., Ltd, ingumkhiqizi ohlinzeka ngolwazi nomhlinzeki ezingxenyeni ezizenzakalelayo zezimoto. Imboni yethu itholakala e-Jvlu Industrial Zone, eXingtai City, esifundazweni sase-Hebei, igxila emkhakheni wokukhiqiza wezingxenye zokubeka uphawu zenjoloba kanye no-oyela bezimoto, njengezimpawu zamafutha, izindandatho ze-O, izindandatho, izihlahla, njll.
Imboni yethu ihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha skwele ayi-1300 futhi inesipiliyoni sokukhiqiza esinothile emkhakheni wezimpawu zenjoloba iminyaka engaphezu kwengu-20 selokhu yasungulwa. Inkampani ine-kneadworkwork, i-workshop yokubumba isibabule, i-workshop yokulungisa, i-workshop yokupakisha, i-workshop yokulungisa kabusha
Inkampani yethu inezinsalela ezingaphezu kuka-20000 zesikhunta kanye nemininingwane emikhulu yezinto zokusetshenziswa, ezinokuhlangenwe nakho okwanele ukubhekana nezimpawu ezenzakalweni ezahlukahlukene nakwizimo zokusebenza ezahlukahlukene.
Singumkhiqizi we-OEM, ukuthuthukiswa kwezingxenye zokuzenzakalelayo ezizenzakalelayo ezinikezwe amakhasimende. singahlinzeka ngezidingo zobuchwepheshe kanye nokusekelwa kwezobuchwepheshe kwezidingo zamakhasimende.
Izinsiza ezizenzakalelayo zokumisa umsebenzi owodwa, Uma unemibuzo, ungangabazi ukuxhumana nathi
Abicah Rubber Seal, Isesekeli Esizenzekelayo, Uphawu Ingxenye, Amafutha Groove, Lawula i-Arm Bushing, Izingxenye ezisele,